I-Quibi Lets Some Horror Episodes isakaze ku-YouTube kubabukeli be-TV
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-Quibi Lets Some Horror Episodes isakaze ku-YouTube kubabukeli be-TV
by UTimothy Rawles April 30, 2020
by UTimothy Rawles April 30, 2020 1,085 ukubukwa
UQuibi ulungiselela ukuvala umnikelo wakhe okhethekile wezinyanga ezintathu zamahhala isikhathi secala futhi inika ababhalisile abangaba khona amazwibela kokuqukethwe kwabo ngaphandle kokuthi balande uhlelo lokusebenza.
Ubhadane lwe-coronavirus kungenzeka luphazamise kakhulu imodeli yeselula uQuibi abezama ukukhipha. Ipulatifomu lokuqukethwe okuyifomu elifushane linamagama amakhulu aseHollywood anikela ngamaphrojekthi, kepha ngabantu ababekiwe ekhaya isici senkonzo esiphathekayo kungenzeka singatholanga intshisekelo enkulu nababhalisile.
Isiqalo sikhiphe iziqephu ze Umdlalo Oyingozi Kakhulu, The Stranger futhi dummy ekhasini layo le-YouTube elisetshenziswe kakhulu njengekhathalogi yamazwibela nama-trailer.
Yize ipulatifomu ibamba izihloko ezingajwayelekile, zinikeza ababukeli kuphela isahluko sokuqala futhi zibacela ukuthi babhalisele ukubona okusele.
Abalandeli bamaHorror bangafuna ukubheka Isihambi, kufakiwe ekubukeni kuqala kwe-YouTube.
Nakhu ukonakala kwesakhiwo:
“Umshayeli osemusha ongahloniphi ohamba phambili uphonswa kwiphupho lakhe elibi kakhulu lapho umgibeli ongaqondakali waseHollywood Hills engena emotweni yakhe. Ukuhamba kwakhe okwesabisayo nokumisa inhliziyo neThe Stranger kwenzeka ngaphezu kwamahora ayi-12 asabekayo njengoba ehamba ngomgwaqo ophansi weLos Angeles emdlalweni okhathaza umgogodla wekati negundane. ”
Futhi Umdlalo Oyingozi Kakhulu kungahle kuvuse intshisekelo yakho:
"Ephelelwe yithemba lokunakekela umkakhe okhulelwe ngaphambi kokuba abulawe yisifo esingalapheki, uDodge Maynard wamukela ithuba lokuthi ahlanganyele emdlalweni obulalayo lapho ezothola khona ukuthi akayena umzingeli - kodwa uyisisulu."